Del ရဲ့ချက်ပြုတ်လှည့်ကွက်၏မီးဖိုချောင်တွင် - အောင်မြင်မှုပုံပြင်များမဂ္ဂဇင်း
Delphine Fortin နှင့်အတူအင်တာဗျူး
ကျနော်တို့ထိုင်ပြီးသူမမီးဖို caramel, marshmallows နှင့်ငန်မြေပဲနဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ချောကလက်အချိုပွဲအနေဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားသည်ဆိုပါစို့တစ်မီးဖိုချောင်စတူဒီယိုထဲမှာ Delphine တွေ့ဆုံရန်။ ငါ့နှုတ်ပြီးသားရေလောင်းနေပါသည်! ကျွန်မပထမဦးဆုံးလွန်ခဲ့တဲ့6လခနျ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုမှာ Delphine တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ငါ့ကိုအထင်ကြီးသူမကအစားအသောက်တွေအကြောင်းဘယ်လောက်အသည်းအသန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါအောင်မြင်ပုံပြင်များမဂ္ဂဇင်းများအတွက်သူမ၏အင်တာဗျူးဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပါတယ်။
hallo, Del! သငျသညျ Del ရဲ့ချက်ပြုတ်လှည့်ကွက်အစာအဟာရဘလော့ဂ်ရေးသားသူပါ၏ သငျသညျယခုအကြောင်းကို3နှစ်ပေါင်းကြောင့်အပြေးနှင့်လစဉ်လတိုင်းစာဖတ်သူများသောင်းနဲ့ချီရှိခဲ့ကြသည်။ အထင်ကြီး! သငျသညျအစာကိုအကြောင်းကိုအသည်းအသန်ရခဲ့ဘူးသည့်အခါဒီတော့ဘယ်လိုရှိသမျှတို့, start ခဲ့တာလဲ
ငါနှလုံးမှာစစ်မှန်တဲ့အစားအစာကိုနှစ်သက်မိပါတယ်။ ဒါကြောင့်ယခုအချိန်အထိငါငါကျော်မိတ်ဆွေများကရှိခဲ့သည့်အခါရိုးရှင်းချက်ပြုတ်နည်းများဖုတ်ဖို့အသုံးပြုကလေးတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်သောအခါငါအမြဲပြီးသားမုန့်ဖုတ်ကြိုက်တယ်နှင့်ကြပါပြီမှတ်မိနိုင်ပါတယ်အဖြစ်။ အစားအသောက်အမြဲငါ့အသက်ကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ မီးဖိုချောင်ထဲမှာစမ်းသပ်ငါ့အကြိုက်ဆုံးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းပေါ်, အသက်ရှင်ခြင်းငါ့ကိုတစ်ခုလုံးကိုနွေရာသီကာလအတွင်းငါ့မိသားစုများအတွက်ချက်ပြုတ်ဖို့အခွင့်အလမ်းကိုပေးတော်မူ၏ငါ၏အခြေခံသင်ယူရာမှတစ်ဦးအကြီးအချက်ပြုတ်သည့်စာအုပ်သုံးပြီးပျော်စရာ၏တွေအများကြီးရှိခဲ့ ပြင်သစ်ချက်ပြုတ်။ ချက်ပြုတ်ခြင်းနှင့်ဖုတ်ငါ၏အသိချင်စိတ်အဆုံးမဲ့ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်ငါ့အတီထွင်ဖန်တီးမှုပါ!
© Delphine Fortin
ငါ 25 လပရော်ဖက်ရှင်နယ်စီမံကိနျးအတှကျ6ခဲ့သောအခါငါဆွီဒင်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ငါဒီနိုင်ငံနှင့်အတူမေတ္တာ၌လဲကျငါ့ရည်းစားတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနဲ့ကျွန်မနည်းနည်းကြာကြာနေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီမှာငါဖြစ်၏:6နှစ်ကြာပြီးနောက်နေဆဲဆွီဒင်၌တည်၏။
ပထမတော့ငါ့အကောလိပ်ပညာရေးအသိဉာဏ်မဟုတ်ဘဲခဲ့ဒါငါ့အပရော်ဖက်ရှင်နယ်စရှိသည် ဖြစ်. , သူတို့အစားအစာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့သျောလညျး, အစားအစာအဘို့အကြှနျုပျ၏အတိုးအဲဒီမှာအမြဲခဲ့, ငါမကြာခဏ (ကျနော် 40 turn သို့မဟုတ်ဒါမယ်လို့သည့်အခါငါ့အ "ဒုတိယဘဝ" အတွက်ငါသည်ငါ၏စိတ်အားထက်သန်မှုအဘို့အသွားနှင့်စားနပ်ရိက္ခာနဲ့ချိတ်ဆက်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို run လိမ့်မယ်လို့ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြောပြဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးကဖီးဖွင့်လှစ်သို့မဟုတ်ခဲ့သည် ) တစ်ခ & B ကိုပြေး။
ကျေးဇူးတင်စရာ, ငါသည်ဤမျှကာလပတ်လုံးစောင့်ဆိုင်းရန်မလိုအပ်ခဲ့ပါဘူး: ဆွီဒင်မကြာမီကြှနျုပျမူရင်းပညာရေး (နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး) မှတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားလမ်းကြောင်း ယူ. ပြင်သစ်အစားအသောက်ကုမ္ပဏီ၏ဒေသဆိုင်ရာတပ်စခန်းများအတွက်စျေးကွက်မဟာဗျူဟာမောင်းထုတ်ရန်အခွင့်အလမ်းကိုပေးတော်မူ၏။ အချိန်ကိုအားဖြင့်, ငါ့ဆွီဒင်သေးကျွမ်းကျင်စွာမဟုတ်ခဲ့နဲ့ကျွန်မချက်ချင်းစိတ်ကူးနှုတ်ဆက်ပြီး။ တစ်နည်းနည်းနဲ့, ငါ့စိတ်အားထက်သန်မှချိတ်ဆက်တစ်ခုခုကြိုးစားရန်ပြီးပြည့်စုံသောဆင်ခြေပဲ! ကိုယ်ကချစ်ပြီးငါ့အအားလပ်ချိန်မှာအချိန်ပေါ်ငါတောင်ကုမ္ပဏီက်ဘ်ဆိုက်အဘို့အချက်ပြုတ်နည်းများကိုခံခဲ့ရသည်။
ခဏတစ်ပွီးနောကျ, ငါ့ရည်းစားတစ်ဦးကိုစတင်ငါ့ကိုယုံကြည် စားနပ်ရိက္ခာဘလော့ဂ် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ငါ့ချက်ပြုတ်နည်းများမျှဝေဖို့။ သူကတစ်ဦးအိုင်တီကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကအရာအားလုံးငါ့အဘို့ပိုလွယ်လာပြီးရိုးရိုးသားသားသူ့ကိုငါမပါဘဲစတင်ခဲ့ကြတာပါ။ ငါနောက်ကျောကိုကြည့်သောအခါ, ဝေးနေဖြင့်ငါနောက်ဆုံး3နှစ်ပေါင်းအဘို့ပြုထားသောအကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာလုံးဝငါ့အသက်ကိုပြောင်းလဲသွားတယ်!
ကောင်းပြီ, ဒီငါသည်ငါ့ဘလော့ဂ်စတင်ခဲ့ပုံဖြစ်ပါသည်။ အချိန်ကိုအသုံးပြုပုံငါကအကြာတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုအဘယ်သူမျှမစိတ်ကူးရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါ ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးစာရွက်အပ်လုဒ်လုပ်ထားအင်္ဂလိပ်နှင့်ပြင်သစ်နှစ်ဦးစလုံး၌ငါ့ဘလော့ဂ်ရေးသားခြင်းစတင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာအတော်လေးအခြေခံဖြစ်ခဲ့သည်: အနည်းငယ်လိုင်းများစာရွက်, စာရွက်ကိုယ်တိုင်နှင့်တစ်ဦးတည်းသာအလွန်အခြေခံရုပ်ပုံမိတ်ဆက်ပေးရန်။ တစ်ပါတ်ပြီးနောက် ငါရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကိုဖန်တီးငါနှင့်အတူလုပ်ပေးမယ်လို့အဘယ်သို့သောအကြောင်းသည်အလွန်ယုံကြည်ဘူး။ သို့သော်မကြာမီငါသုညကနေ 50 000 ပရိတ်သတ်များမှ (ပြင်သစ်နှင့်အမေရိကန်စာဖတ်သူတွေအများကြီးနှင့်အတူ) ငါ၏အအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပရိုဖိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ငါ၏အအသိုင်းအဝိုင်းကြီးပြင်းဒါကြောင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကအဆုံး၌ကောင်းတစ်စိတ်ကူးပဲ!
အစအဦး၌ငါမယ့်လူတွေ, ငါ့ဘလော့ဂ်ကိုဖတ်ကြစေချင်တယ်။ ငါချက်ပြုတ်၌ငါ့ကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်လာဖို့ကျွန်မရဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်နေဓာတ်ပုံနှင့်အစားအစာအကြောင်းကိုရေးသားခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ငါလှုံ့ဆော်မှု၏ search အခြားဘလော့ဂ်များကိုဖတ်ရှုစတင်ခဲ့သည်။ ဒီဇိုင်း, ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး, Google Analytics နှင့်ကြောက်စရာ SEO ဆိုသည်မှာ: ထိုအခါငါကအခြားအရေးကြီးသောကဏ္ဍများအာရုံစိုက်ဖို့စတင်ခဲ့တယ်။ ဘလော့ဂ်အပြေးအလွန်စွဲလမ်းသည်နှင့်သင်သည်သင်၏အတွေ့အကြုံကနေအများကြီးသင်ယူကြသည်။
2 နှစ်ကြာပြီးနောက်ငါကွဲပြားခြားနားသောတာဝနျမြားရရနျစတငျ, တစ်ဦးထက်ပိုသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဆင့်တွင်ငါ့ဘလော့ဂ် run ဖို့စတင်ခဲ့: ချက်ပြုတ်သရုပ်ပြ, sponsored ဆောင်းပါးများ, ကွဲပြားခြားနားသောအစားအစာကုမ္ပဏီများနှင့်ပူးပေါင်း, ချက်ပြုတ်နည်းများဖန်တီးခြင်းနှင့် ဖုတ်ဗီဒီယိုများ, etc ကြောင်း၏ထိပ်တွင်ငါနေဆဲလစဉ်လတိုင်းငါ့ကိုအနည်းငယ်ဝင်ငွေဆောင်တတ်၏ထားတဲ့ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာကြော်ငြာဖွံ့ဖြိုးပြီးပါပြီ။
ယနေ့ငါ့အ #1 ရည်မှန်းချက်ကိုငါ့စာဖတ်သူများဖျော်ဖြေဖို့နေဆဲဖြစ်ပါသည်: တစ်နည်းနည်းနဲ့, သင်သည်သင်၏အွန်လိုင်းပရိသတ်ကိုနှင့်အတူတစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့နှင့်နီးစပ်ဆက်သွယ်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နှင့်အရေးအပါဆုံးရည်မှန်းချက်ကသူတို့ကိုစိတ်ပျက်မဟုတ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်းအရာဘလော့ဂ်များအတွက်သော့ချက်, သင်၏စာဖတ်သူများသင်သည်ထိုသူတို့နှင့်အတူရိုးသားဖြစ်သူတို့ကိုသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမြင်အားပြောပြရန်မျှော်လင့်ထား။ ဒါဟာဘလော့ဂ်နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ဖို့ ok ရဲ့, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တာဝန်တွေနှင့်သင့်တန်ဖိုးများကိုအကြားလက်ျာဘက်ချိန်ခွင်လျှာကိုရှာဖွေရန်ရှိသည်။ ဤသည်ငါ့အဘို့ငါမယုံကြည်ဘူးသောကုမ္ပဏီနှင့်အတူမိတ်ဖက်ဘယ်တော့မှလိုကြောင်းဥပမာကိုဆိုလိုသည်။ ဒါဟာငါ့အစာဖတ်သူများကိုဦးတည်ရိုးရိုးသားသားဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ငါကသဘာဝပါဝင်ပစ္စည်းများမှခရက်ဒစ်ပေးပြီးကျွန်မပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရအတွက်မယုံကြဘူးလုပ်ငန်းများ၌အစားအစာဝယ်ယူရန်ငါ၏အစာဖတ်သူများအကြံပေးတာပါ။
တိတ်ဆိတ်။ ကျနော်တို့ချောကလက်အချိုပွဲသို့တူးဖော်ခြင်းနှင့်က vanilla ရေခဲမုန့်နှင့်အတူအလွန်ကောင်းစွာလက်ထပ်မယ်လို့ဘယ်လောက်ဆွေးနွေးခြင်းနေကြသည်။ (အစားအစာ) ဘလော့ဂါများနှင့်ပုံမှန်စာဖတ်သူတွေ: ကျနော်တို့အလွယ်တကူနှစ်ခုအဓိကအမျိုးအစား၌ငါ့စာဖတ်သူများခွဲနိုင်ပါတယ်။ ငါဘလော့ဂ်ပေါ်မှာမကြာခဏပိုပြီးမော်ကွန်းရလဒ်ထက်ထိုနှစ်ပါးတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးငါ့ထံသို့နီးကပ်ခံစားရတယ်ငါအဖြစ်မှန်နှင့်တကွ, ဘလော့ဂ်၏ "နောက်ကွယ်မှ" ချက်ပြုတ်သို့မဟုတ်သူတို့ကိုဖေါ်ပြခြင်း၌သူတို့ကိုကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးလိုလုပ်နိုင်ပါတယ်ချင်တယ် ပြောပြပါ။ ငါသည်ငါ့စာဖတ်သူများအကြောင်းအများကြီးဂရုစိုက်ကြပါနဲ့ကျွန်မသူတို့ကိုအကြှနျုပျကိုအထူးခံစားရချင်, သူတို့ကိုဆွီဒင်, အမေရိကန်နှင့်ပြင်သစ်, ငါ၏အသက်တာ၏3နိုင်ငံတွေအကြားအကြှနျုပျ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝအကြောင်းကိုနည်းနည်းပြောပြရန်ကြိုးစား။
ငါချက်ပြုတ်နဲ့ငါ့စျေးကွက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှုပေါင်းစပ်ပြီး, ငါ့ကုမ္ပဏီကိုစက်တင်ဘာလ 2014 အတွက်ဘလော့ဂ်ဆက်စပ်စတင်ခဲ့သည်။ ငါသည်ငါ့ဘလော့ဂ်နှင့်အတူကြီးမားတဲ့ရည်မှန်းချက်ရှိသည်နှင့်ငါတစ်ချိန်တည်းမှာအများအပြားစီမံကိန်းများကိုကို run ။ ဒါဟာအချိန်နှင့်စွမ်းအင်၏စည်းကမ်းချက်များ၌အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဒါပေမယ့်လည်းအလွန်တောင်းဆိုမှုများသည်။ တိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်သိတယ်အဖြစ်, တည်ဆောက်ခြင်းကြီးမားသောအမှုအရာအချိန် ယူ. , ငါသည်လည်းသူတို့အားလယ်ကွင်း၌ငါ့ကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်စေခြင်းအပေါ်တစ်ဦးအားကြီးသောအာရုံနှင့်အတူတစ်ချိန်တည်းမှာအခြားကုမ္ပဏီများတွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတူလုပ်ကိုင်ခဲ့ကြဒါကြောင့်ပါပဲ။ သင်သည်အမြဲတစေပေါ်မှာအလုပ်မလုပ်ဖို့ရှိသည်ဒီတော့ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး, ဘလော့ဂ်အတွက်အရေးအပါဆုံးရှုထောင့်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒါပေမယ့်သင်တန်း၏, အစားအစာကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးအကျိုးစီးပွားနှင့်ငါ့အမာခံလှုပ်ရှားမှုနေဆဲဖြစ်သည်။ စာမစားဘဲ, ငါ့ဘလော့ဂ်အင်ပါယာမတည်ရှိမယ်လို့!
ရေရှည်ရှုထောင့်မှာတော့ငါသာငါ့ဘလော့ဂ်လှုပ်ရှားမှုများပယ်နထေိုငျတတ်နိုင်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ငါသညျဤအကွောငျးကိုအမှန်တကယ်အသည်းအသန်ဖြစ်ကြောင်းကိုကြောင့်အစားအစာစီမံကိန်းများကိုမှကြွလာသောအခါ, ငါ့တီထွင်ဖန်တီးမှုအဘယ်သူမျှမကန့်သတ်ထားပါတယ်။ ငါနေ့ရက်ကာလအဘို့နာရီပေါင်းများစွာအလုပ်လုပ်ဆဲညမှာအသစ်သောစီမံကိန်းများနှင့် ပတ်သက်. အိပ်မက်မက်နိုင်ပါ။ ကြှနျတေျာ့စိတျထဲအားလုံးအကြောင်းပါ!
ကောင်းပြီ, ငါရှိသေးဖြစ်ကြောင်းကိုသေချာမဖြစ်ကြောင်းကို, ဒါကြောင့် (ပြုံးရယ်) ဖြေဆိုရန်ခက်ခဲပါလိမ့်မည်။ သို့သော်ကျွန်မကြိုးစားပမ်းစားအလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်သည်းခံခြင်းအများကြီးနဲ့ပေါင်းစပ်အောင်မြင်မယ့်ခိုင်မာတဲ့အလိုတော်, အောင်မြင်မှုဆောင်ခဲ့ဦးမည်ထင်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, ငါကံ (လက်ျာဘက်ယခုအချိန်တွင်ညာဘက်နေရာတွင်ဖြစ်ခြင်းကဲ့သို့သည် "ညာဘက်" ကလူတှေ့ဆုံ), တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်စိတ်အားထက်သန်တဲ့အဖြစ်တော့ add လိမ့်မယ်။
ငါ၏အစာဖတ်သူတွေအတွက်မဆိုအကွံဉာဏျ? ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ဘယ်တော့မှသင့်ရဲ့အိပ်မက်တွေကိုအပေါ်အရှုံးမပေး: အိပ်မက်ကြီးကြီးမက်ခဲယဉ်းအလုပ်လုပ်အာရုံစိုက်နေဖို့, ကောင်းသောလူတို့နှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝန်းရံ။
ကျွန်တော် ..... လုပ်ရတာကြိုက်ပါတယ်! နံနက်စာသည်နှင့်အစဉ်မပြတ်ငါထားသောနေ့အကြိုက်ဆုံးမုန့်ညက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်မနံနက်တိုင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုကွဲပြားခြားနားသောမနက်စာပြင်ဆင်ထားရန်ကိုချစ်, ငါအများကြီးအကြိုက်ဆုံးရှိသည်။
သူတို့တွင်ငါ goji သီးနဲ့ငါ့သက်သတ်လွတ်နှစ်ဆချောကလက် oatmeal အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ပဲအံ့သြဖွယ်ကြောင်းကိုတစ်ဦးကအလွန်ရိုးရှင်းပြီးကျန်းမာစာရွက်။ သင်ကရှာတှေ့နိုငျ ဤနေရာတွင်အပြည့်အဝစာရွက်.
သူတို့တွင်ငါကိုက်လန်နှင့်ပိုးစာယိုနဲ့ငါ့ savory ပြင်သစ်ရှိကြောင်းသံတမန်နည်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါဂန္ပြင်သစ်ရှိကြောင်းသံတမန်နည်းမှတစ်ဦးကချစ်စရာကောင်းတဲ့ savory လှည့်ကွက်.
တစ်ဦးတည်းသာလျှို့ဝှက်ပစ္စည်းရွေးချယ်ခြင်းသူတို့ထဲကဤမျှလောက်များစွာသောရှိပါတယ်, ခက်ခဲပါ! ဒါပေမယ့်မုန့်ဖုတ်ထဲတွင် Tonka bean ကို နှင့် cardamom ကြှနျတေျာ့နှစ်ခုအကြိုက်ဆုံးနေသောခေါင်းစဉ်: ငါ (ဥပမာအားဖြင့်တစ်crèmebrûlée၌) အများအားဖြင့် custards အတွက် tonka ကိုသုံးပါနှင့် pastries မဆိုကြင်နာအတွက် cardamom, ငါသည်ဤအမွှေးအကြိုင်ကိုချစ်။ ချက်ပြုတ်မှာတော့ကျွန်မရဲ့ချက်ပြုတ်နည်းများအချို့ထုံးများနှင့် cilantro add လို!
အစားအစာ: ကောင်းပြီ, ငါဖြေဖို့ငါ့ကိုသွေးဆောင်တော်မူ! ကရေတွက်ပါသလား? (ပြုံးရယ်) ။ တကယ်တော့ငါသမိုင်း, အများအားဖြင့်ခေတ်သစ်နှင့်ခေတ်ပြိုင်သမိုင်း (ကျနော်ပင်ခေတ်သစ်သမိုင်းတစ်ဦးမာစတာဒီဂရီရှိသည်) ကိုချစ်။ ဒါပေမယ့်ပင်ဒီစိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်အတူငါကအစားအသောက်ချိတ်ဆက်သည့်အခါချစ်ကြတယ်။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, ငါသည်အမကြာသေးမီကအစားအသောက်များအကြောင်းကိုသမိုင်းဝင်ရုပ်သံ-series တစ်ခုအပိုအဖြစ်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့လေပြီတကား လိုပဲငါ said: အစားအစာဘဝမှာနေရာတိုင်းပါ!
Facebook ပေါ်မှာ del ရဲ့ချက်ပြုတ်လှည့်ကွက်
ဘလော့ဂ်, ချက်ပြုတ် | | rating:5/ 30